Kedụ uru na ọghọm dị na Dropshipping | ECommerce ozi ọma
Kedu uru na ọghọm dị na Dropshipping
Na mbụ anyị na-ekwu banyere Dropshipping na ọrụ ya. Ihu ọma ọ bụ banyere ire site na ndị ọzọ; Agbanyeghị, kedụ uru na ọghọm dị na mbubata Dropshipping? Ọ dị mma maka Ecommerce gị ịnabata usoro a?
1 Kedụ ka Dropshipping si arụ ọrụ?
2 Uru nke Mbupu
3 Kọ ihe ụfọdụ nke Dropshipping
Kedụ ka Dropshipping si arụ ọrụ?
Na Dropshipping, ụlọ ọrụ A, nke na-arụpụta ngwa ahịa dị ugbu a, na-enye Dropshipping; mgbe ahụ ụlọ ọrụ B, nke bụ, dịka ọmụmaatụ, onye na-ere ngwá electronic, chọrọ ire ngwaahịa nke ụlọ ọrụ A. Onye ahịa ahụ na-enye iwu maka ihe ndị ahụ site na ụlọ ọrụ B, nke n'aka nke ya na-ezigara ụlọ ọrụ A iwu, na ụlọ ọrụ A Ultima bụ onye na-elekọta ya nke iziga ngwaahịa ozugbo na ndị ahịa. Ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ dịtụ mgbagwoju anya, ọ bụ n'ezie usoro kwụ ọtọ.
Uru nke Mbupu
Na Dropshipping, ị nwere ike ịmalite a azụmahịa n'ịntanetị na-enweghị itinye ego buru ibu ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa ịkwụ ụgwọ mbido. Companylọ ọrụ ahụ ekwesịghị ịkwakọ ngwaahịa ma ọlị na-apụkarị n'akụkụ akụrụngwa.
Kọ ihe ụfọdụ nke Dropshipping
Banyere Ghọta ọghọm nke Dropshipping, ihe mbụ ị ga-ahụ bụ na ndị na-ere ahịa anaghị enwe ngwa ahịa. N'ihi ya, ndị ahịa enweghị ụzọ ha si ahụ ihe tupu ha azụta ihe. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ndị ahịa enweghị afọ ojuju na ngwaahịa a, mkpesa ndị ahụ bụ maka ụlọ ọrụ ebe azụrụ ngwaahịa ahụ ọ bụghị maka ụlọ ọrụ nyere ya.
Tinyere ihe ndị dị n'elu, a ghakwara iburu n'uche na ọ bụrụ na ebufe ngwaahịa nke ngwaahịa a na-egbu oge ma ọ bụ na enwere nsogbu na mbupu ahụ, ụlọ ọrụ ahụ rere ngwaahịa ahụ ga-ahụ maka ya. E kwesịkwara ịkọwa na asọmpi dị ezigbo mkpa, enwere ọtụtụ ndị na-eji usoro a, nke pụtara na a ga-enwe ọnụ ọgụgụ buru ibu nke saịtị ndị na-enye otu ngwaahịa ahụ na mgbe ụfọdụ ọ gaghị enwe ike ịsọ mpi na ọnụahịa ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Ngwaọrụ » Dropshipping » Kedu uru na ọghọm dị na Dropshipping
Otu esi achọta ma dọta ndị ahịa na Ecommerce gị